Ruuxaani: Caalamka xiriir wanaagsan ayaan la yeelanaynaa - BBC News Somali
Ruuxaani: Caalamka xiriir wanaagsan ayaan la yeelanaynaa
Image caption Madaxwayne Hassan Ruuxani ayaa ka digay in Mareykanka ay heshiika ka baxaan
Madaxwaynaha dalka Iiraan Hassan Ruuxani, ayaa sheegay in dalkiisa uu raadin doono xiriir wanaagsan oo uu la yeesho caalamka intiisa kale.
Hadalkiisa ayaa ku soo beegamaya saacado uun ka hor iyada oo la filayo in madaxwayne Trump uu shaaciyo go'aankiisa ku aadan in uu ka baxayo heshiiska Niyukleerka Iiraan iyo in kale.
Mr Ruuxani oo khudbad si toos ah uga jeedinayay telefishinka qaranka ayaa qiray in laga yaabo in Iiraan ay caqabado la kulanto haddii Mareykanka ay ka baxaan heshiiska balse caqabadahaasi ay ka soo kabsan doonaan.
Sargaal u hadlay aqalka cad ayaa sheegay in Mr Trump laga yaabo in uu ku dhawaaqo in qayb ahaan heshiiska uu ka baxay.
Balse ma cadda waxa ay micnaheeda noqon karto in qayb ahaan uu heshiiska ka baxo.
Britain, Fransiiska iyo Jarmalka oo dhammaantood saxiixay heshiiska Niyukleerka Iiraan ayaa ugu baaqay Mr Trump in uusan heshiiska ka bixin.
Maxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa horey u sheegay in haddii uu Mareykanku ka baxo hishiiska nukliyeerka in uu wajihi doono qoomamo taariikhi ah.
Maxaa ka mid ahaa qodobada heshiiyay?
Wadamadan ayaa kala ah Mareykanka , UK, Faransiiska, Shiinaha iyo Ruushka -waxaana heshiiska qayb ka ah sidoo kale Jarmalka.
Waxaa heshiiskani barnaamijka Niyukleerka ee iiraan iyo wadamada quwadaha waawayn loo yaqaanaa (P5+1).
Heshiiska ayaa waxaa lagu taageeray qaraarkii golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ee tirsigiisu ahaa 2231, waxaana dhaqangalinta heshiiskani uu bilaabamay bishii January 2016, ka dib markii ay hay'ada caalamiga ah ee ka hortaga hubka Atoomikada ay xaqiijiso in Iiraan ay fulisay balanqaadka.